Dumar Jacaylkoodu u horseeday in la dilo – WIDHWIDH ONLINE
Dumar Jacaylkoodu u horseeday in la dilo
Marka la soo hadal qaado jacayl, waxa maankaaga ku soo dhacayaa waa laba qof oo in badan is doonay, duruufo badan oo xayiray wada jirkoodana ka gudbay oo kama dambaystii is helay.
Intaa ka dib waxaad filaysaa waa in badhaadhe ay labadaa qof ku wada noolaadaan inta noloshooda ka hadhay. Waana sida inta badan dhacda ee mararka dambe dadka qaarkood kaba sheekeeyaan waayihii ay soo mareen iyo dhibaatadii ay u muteen caashaqooda.
Waxa se xaqiiqo ah in mararka qaarkood uu waari waayo jacaylkaasi, sababo badan oo dumiyaana mar dambe soo baxaan.
Arimahaas ayaa qaarkood waxay kallifaan in ninku gabadha qudhaba ka jaro. Waxaana waxyaabaha ku kallifa lagu sheegaa kuwo badan oo ay ka mid yihiin in ninku gabadhii ay wada socdeen ka tirsado khiyaano ama kuba arko in ay nin kale la hayso oo hinsaase dartii uba dilo gabadhuu jeclaa.
Arimaha caynkaas ahi waa kuwo aan dunida ku cusbayn, mar kastana wararkoodu soo baxaa. Waxaana mararka qaarkood lagaba qoraa buugaan ama filimo ayaa laga sameeyaa.
Raggaa dumarkii ay saaxiibka ahaayeen qudha ka jaray iyada oo marka horena loo haystay in aanay abid kala hadhi doonin warkoodu kuma koobna uun dalalka Galbeedka ee xataa Afrika ayaa in ay ka dhacaan warbaahintu tabisaa.
Dalka Kenya ayaa dhawr dhacdo oo noocaas ahi ka dhaceen. Sida uu xaqiijiyey urur u dooda xuquuqda dumarka oo tiro kooba dumarka la laayo ayaa sheegay in intii u dhaxaysay 2 Jeeniweri 2019 ilaa 25 Feeberweri 2019 shan iyo labaatan dumar ah lagu dilay Kenya oo ay qudha ka jareen raggii qabay ama kuwo ay saaxiib ahaayeen.
Dilalkaa waxa ugu dambeeyey mid dhacay shalay 9 Abriil 2019 oo magaalada Eldoret uu haweenay dhakhtarad ahayd ku dilay saaxiibkeed.
Gabadhaa la dilay ayaa dad ay is yaqaaneen sheegeen, in ay u sheegtay in ay ninkaa saaxiib ahaayeen ilaa markii ay dugsiga hoose dhiganayeen ka dibna markii waxbarashadii ay dhamaysteen ay kala lumeen oo ay waa dambe iska heleen barta bulshadu ku xidhiidho ee Facebook.
Sidoo kale waxa in xidhiidh jacayl ka dhexeeyey labadooda xaqiijisay ninka gabadha dilay hooyadii oo wargeyska The Standard ee Nairobi ka soo baxaa uu soo xigtay iyada oo tidhi “xidhiidh bay lahaayeen gabadhaa iyo inankaygu xataa intaanu shaqoba helin ee aanay iyaduna jaamacadda gelin. Wuxuu doonayey inuu guursado laakiin waxa muuqata in ay isa seegeen”.
Horraantii bishii Feeberweri ayaa booliska waxa lagu wargeliyey meydad qudhmay oo laga helay guri ku yaal magaalada Naivasha ee isla dalka Kenya.
Natiijadii hor dhaca ahayd ee baadhitaankuna waxay muujisay in meydadka haweenayda iyo inanteeeda ay ka muuqatay in la kufsaday intaan la dilin ka hor.
Booliska ayaa rumaysan inuu dumarkaa dilay nin ay saaxiib ahaayeen haweenayda inanta dhashay.
Taliyaha qaybta booliska Naivasha ayaa maalmo ka dib sheegay in ay goobayaan ninkii ay haweenayda saaxiibka ahaayeen oo boolisku tuhunsan yahay isaguna dhuumanaya. Waxaanu intaa ku daray in markii u dambaysay ee ninkaa la tuhunsanyahay la arkaa ay ahayd todobaad ka hor markii boolisku helay meydadkaas oo ninkaasi gurigaa isaga oo ka sii baxaya la sheegay in la arkay.
Warbaahinta Kenya waxay marar badan baahisaa warar sheegaya dumar ay dileen rag ay saaxiibo ahaayeen ama kuwo qabay, oo mararka qaarkoodna ay raggaa dumarka hinaasaha ku dilaa yihiin askar iyo saraakiil boolis ah.
Dilka haweenayda shalay ninka ay saaxiibka ahaayeen ku dilay Eldoret, ayaa ka cadhaysiiyey bulshada Kenya, ha u badnaadeen dumaka iyo ururada u dooda xuquuqda haweenkuye.
Waxay dadka reer Kenya dilkaa shalay ilaa maantadan ku hadal hayeen barta Twitter-ka ee bulshadu ku xidhiidho oo waxa halqabsi [hashtag] u ahaa doodda soctay EqualityForGirls
Wasiir katirsan Xukuumada Ra’isul Wasaare Kheyre oo Dacwad laga gudbinayo
Published: April 7, 20197:31 am
Qarax miino oo Ciidamo ka tirsan AMISOM lagula eegtay duleedka degmada Baraawe.
Published: January 2, 20185:48 am